Xinhua Myanmar - အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ ရထားတိမ်းမှုဖြစ်ပွားရာ ခရီးသည် ၁၁ ဦးသေဆုံး ၊ ၉၈ ဦးဒဏ်ရာရဟု ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
အီဂျစ်နိုင်ငံ Toukh တွင် ဧပြီ ၁၈ ရက်က ရထားတိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အခင်းဖြစ်နေရာမြင်ကွင်းများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Africa & Middle East
အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ လူနာတင်ယာဉ် စုစုပေါင်း အစီး ၆၀ စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးရုံ သုံးခုသို့ ခွဲ၍ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကိုင်ရိုမြို့မှ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Mansoura မြို့သို့ ဦးတည်မောင်းနှင်လာသည့် လူစီးတွဲလေးတွဲပါ ရထားတိမ်းမှောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အီဂျစ်နိုင်ငံ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
အီဂျစ်နိုင်ငံ Toukh တွင် ဧပြီ ၁၈ ရက်က ရထားတိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အခင်းဖြစ်နေရာမြင်ကွင်းများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အီဂျစ်သမ္မတ Abdel-Fattah al-Sisi က ရထားတိမ်းမှောက်ရခြင်း အကြောင်းအရာ နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ရန် အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရေး ကော်မတီတစ်ရပ်အား ဖွဲ့စည်းသွားရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။အဆိုပါ ရထားမောင်းသူ နှင့် ၎င်း၏ လက်ထောက်အပြင် Toukh ဘူတာရုံမှ အခြားရထားအရာရှိ ၈ ဦးကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း အစိုးရရှေ့နေရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အဦခေတ်မမီခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ရထားတိမ်းမှောက်မှုဖြစ်စဉ်များ ကာလရှည်ကြာစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော မတ် ၂၆ ရက်က နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Sohag ပြည်နယ်တွင် ရထားတိမ်းမှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ ၂၀ ဦး သေဆုံးပြီး အခြား ၁၉၉ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
အီဂျစ်အစိုးရရှေ့နေရုံးက ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဧပြီ ၁၂ ရက်တွင် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် Sohag ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရထားနှစ်စင်းတိုက်မှုသည် ရထားလမ်းဝန်ထမ်းများ တာဝန်ပေါ့လျော့ခြင်း နှင့် လူသားအမှားကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ အဆိုးရွားဆုံးရထားမတော်တဆမှုအဖြစ် ၂၀၀၂ ခုနှစ်က ကိုင်ရိုမြို့မှ တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၇၀ အကွာရှိ El-Ayyat တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုင်ရို-Luxor ရထားခရီးစဉ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က လူပေါင်း ၃၈၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
CAIRO, April 18 (Xinhua) -- At least 11 people were killed and 98 others were wounded inatrain derailment on Sunday in the Delta city of Toukh, north of the Egyptian capital Cairo, the Egyptian Health Ministry said.
A total of 60 ambulances have been sent to the scene and the wounded have been transferred to three public hospitals, the ministry said inastatement.
An investigation into the accident is underway with the train driver and his assistant, as well as eight other officials at the Toukh train station, the office of the Public Prosecutor said.
The worst train accident in Egypt took place in February 2002 in El-Ayyat, 70 km south of Cairo, whenatrain traveling from Cairo to Luxor caught fire that killed 383 people.
The photo shows the site ofatrain derailment in Toukh, Egypt, on April 18, 2021. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Previous Article လူ ၃၂ ဦးပါဝင်သော ပါလက်စတိုင်းမိသားစုက ကရာတေးအားကစားလေ့ကျင့်မှုအတွက် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ရန် လျှောက်ထား
Next Article ပင်လယ်နက်တွင် ရုရှားစစ်သင်္ဘောများ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ဆောင်ရွက်မည်